हामीले स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दा सजिलो थिएन। २०४५ सालमा मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रुपमा काम सुरु गरेकी थिएँ। त्यो बेला म ४५ वर्षकै थिएँ। मेरा चार जना छोराछोरीको जन्म भइसकेको थियो। मेरो घर गोरखाको अति विकट गाउँ भच्चेक सिमजोङ ३, हालको अजिरकोट...
डा. विवेक तोदी, कन्सलट्यान्ट पेडियाट्रिक नफ्रोलोजिस्ट बालबालिकामा कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत देखिने समस्या पनि आउँछ । यस्तो समस्या आएमा सोझै विशेषज्ञ डाक्टरलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ । पिसाबमा रगत देखिने धेरै कारण हुन सक्छन् । तीमध्ये एउटा...
नायिका अश्लेशा ठकुरीले सन्तोष सेनको सिनेमा ‘प्रेमगीत २’ बाट डेब्यु गर्दैछिन् । साउन १३ गते रिलिज हुने यस सिनेमाको प्रमोशनमा व्यस्त रहेकी नायिका अश्लेषाले हामीसँग जीवनका केही महत्वपूर्ण पाटाहरु सेयर गरेकी छिन् । बाल्यकाल र पढाई मेरो जन्म कैलाली...
बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ
काठमाडौँ, असार ९ बृहत्तर यौनिकता शिक्षालाई औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। ‘बृहत्तर यौनिकता शिक्षासम्बन्धी पत्रकारसँगको पैरवी कार्यशाला गोष्ठी’का सहभागी वक्ताले सो आवश्यकता औँल्याएका हुन्। सो...
स्वास्थ्यका यी कर्मचारी अब स्थानीय तहमा
६ असार । सरकारले पहिलो चरणमा निर्वाचान सकिएका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम अघि बढेको हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र जनसरोकारका विषय भएको भन्दै...
स्तन महिलाको सहायक प्रजनन अङ्ग हो । महिलाको छातीमा रहने यो विशेष ग्रन्थि शिशुको पोषणका साथसाथै यौनका दृष्टिकोणले पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ । स्तनमा दूध बनाउने ग्रन्थि, दूध ग्रन्थिबाट मुन्टासम्म दूध ओसार्ने नलीहरू, मुन्टा, मुन्टा वरिपरिका भाग, रेसीय तन्तु एवं...
दिमाग कसरी स्वस्थ राख्ने ?
Anchorहाम्रो मस्तिष्क (दिमाग) र शरीर विच गहन सम्वन्ध छ । मस्तिष्क कमाण्डर इन चिफ हो भने शरीरका अन्य अंग उसको निर्देशनमा काम गर्ने सिपाहीहरु । शरीर गाडी हो भने मस्तिष्क चालक या भनौ शरीर हवाइजहाज हो भने मस्तिष्क यसको पाइलट । स्वाभाविक छ मस्तिष्क जति राम्रो भयो, जति...
२० जेठ । सुन्दर देखिन को नचाहला र । तर, सुन्दर र चम्किलो छाला भन्नेवित्तिकै कहाँ बनाउन सकिन्छ र । अझ अनुहारमा आउने अत्याधिक डन्डीफोरले त अनुहारलाई कुरुप नै बनाइदिन्छ । सुन्दर मुहारलाई कुरुप बनाउने डन्डिफोरलाई सामान्य घरेलु उपायले पनि हटाउन सकिन्छ ।...
​स्वास्थ्यका कारण फर्किएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिएको प्रति व्यपसायीको आपत्ती
काठमाडौं, माघ २५– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विदेशमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फेल भएर फर्किएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने स्वास्थ्य व्यवसायीको घोषणा प्रति खेद व्यक्त गरेको छ । संघका महासचिव रोहन गुरुङले विज्ञप्ती निकाल्दै तत्काल पीडितलाई क्षतिपूर्ति...
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति कति?
काठमाडौँ माघ २४ – स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा बुझाएका छन्। राज्यमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार उनको नाममा संखुवासभामा दुई वटा घर...
जाडो महिनामा मोटाउने सजिलो तरिका
गर्मीमा भन्दा खाना रुच्ने भएको हुँदा मोटाउनको लागि परफेक्ट समय जाडोलाई मानिन्छ । समयको फाईदा उठाउँदै तपाईँ मोटाउन चाहनुहुन्छ भने यो समयमा खानामा ध्यान दिनुहोस् । तौल बढाउनको लागि हाई प्रोटिनयुक्त खानाको आवश्यकता पर्छ । दिनमा हामीले मुख खाली नराखी केही न केही...
पाल्पा, माघ १२ – सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर यो सत्य घटना हो । कुखुराको पनि परिवार नियोजन हुन्छ भन्दा अब नौलो मान्नु पर्दैन । कुखुराको भालेमा बन्ध्याकरण सफल बन्दै गएपछि अब अच्चम मान्नु पर्दैन । पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका–१४ बर्दलेका जनार्दन पन्तले...
पिसाबले बताउँछ, तपाईं के खानु हुनुहुन्छ
काठमाडौं,माघ ४ – पिसाबको परीक्षणबाट मानिसले कत्तिको स्वस्थकर खाना खाएको छ भन्ने पत्तालगाउन सकिने भएको छ । बेलायतका वैज्ञानिकले व्यक्तिको पिसाबको परीक्षणबाट उसले खाएको खाना कत्तिको स्वस्थकर थियो भन्ने थाहा पाउन सकिने बताएका हुन् । नयाँ विधि अनुसार गरिने...